Madaxda Ismaamulka Degaanka Oromada ayaa siro badan bannaanka soo dhigey. - Ogaden24 | Ogaden24
Aug 10, 2020 - Comments off
Shalay hadal dheer oo la sii daayey, Madaxa Ismaamulka Degaanka Oromada ayuu siro badan bannaanka soo dhigey.
Guud ahaan hadalkiisii oo la is odhan karo ma waxuu ku dejineyey kacaanka Oromada mise waxuu ku abuurayey xaalad hor leh; waxaan dulucda ka soo qaadaneynaa:-
1) EPRDF waxaa danaheeda in loogu adeego u sameeysatey TPLF ; Annaguna waxaan PP u sameeysaney in naloogu adeego oo aan annagu diiq ka ahaanno.
2) Finfine waxaanu awal ka ahayn danyeero, maantana annaga ayaa wax walba ka ah. Si aan si buuxdo ugu la wareegno Finfine, waxaa noo qorsheysan in aan sameeyno Afar maamul megaalo Federaal ah. Sidaa ayaanu 100% kula wareegeynaa awoodda iyo Lahaansha Addis Ababa. Ogow Jigjiga waa kamid megaalo Federaalka la soo wado.
3) Golaha lagu dooranayo Gudd. Iyo ku xigeenka Gudd. PP annaga ayaa leh codka aqlabiyadda mar walbana waa in uu ahaado mid aan keensanno anagu oo Oromo ama adeegahanaga ah.
4) Afka Oromada ayaa noqonaya midka kowaad ee Federaalka. Si Af Amxaarka aan hoos ugu dhigno ayaanu Af Somaali, Tigree, Iyo Canfar ugu soo kordhiney in ay noqdaan afafka lagu maamulo Federalka. Amxaaro iyo Af Amxaariga hoos ayuu u foorarsadey in uu baabo.
5) Ethiopia mustaqbalka waa in ay ahaato mid ay xukunto OROMO. Waxaan qorsheyney in Geeska Africa ay Oromo noqoto midda u talisa.
6) Oromo dambbe oo loo taliyo iyo Oromo Oroma disha wey dhammaatey. Bernaamijka sidii aan ugu talo gallay ayuu u socdaa.
7) Qeero annaga abuuray, Aniguna waxaan ahay xubin Qeero ah.
Hadalka durbaba waxaa aad ugu hadlaya warbaahinta madaxabannaan ee Amxaarada oo ku baaqaya ama dalbaya in xilka laga qaado maxkamadna la soo taago Shimalis Abdisa.
Iyada oo xiisadda labada qowmiyadood ee Abyssinia waa Amxaaro iyo Tigree ay maalmahan socotey lana sheegay in ciidamadoodu isku hor fadhiyaan xuduuddooda : Hadalka Shimalis waxuu albaabka u furaya xiisad cusub oo Amxaaro iyo Oromo.
Amxaaro durba waxay ku qeeylyeysaa intii isbeddelkan Oromadu socdey waxaa nalaga diley 2000 qof. Illaa haddana Oromo waxay nagu waddaa dil iyo gawrac. Waxaan ogaaney in madaxda Oromada ay afka baarkii nagula hadlayaan oo iyagu ay ka dambbeeyaan
Dhibaatada lagu hayo Amxaarada.
Ethiopia magac la yidhaah waxuu u jirey in mar walba lagu ilaaliyo sarreeynta ,madaxnimada iyo danaha Amxaarada ; waxaad mooddaa in uu Shimalis Qarxiyey in uu xilligaa dhammaadey oo ay Oromanimo beddeleyso waxii loo yeqaaney Ethiopia.
Waa doqonimo Somaali dad iyada gumeysta haddii ay isku hayaan aniga ayaa wax gumeysan in middna loo jixiyo. Waa wax aad loogu farxo waxii ay nagu haysey in ay isku hayso.ALLE swt. Ha u sii badhi weeyneyo. ” Dab oo gubo, dareemooy Olol duulnna ayuu ka hadhin dhammaantood….!”
” WAA LAGU DIGTAA DUUL HADDUU KUU DARRAAN JIRAYEY ; BAL DAYOOY DULIGII GUMEYSIGA AMXAARAAD, WAKAA SII DABAYSHADEY”!!!
Guusha waxaa iska leh shacabka garta xaqiisa jidka xaqana raaca!!!
Qore:- Namus Yurub